सम्बन्धविच्छेदबारे मनिषा कोइरालाले भनेकी थिइन्, ‘मेरो भाग्यमा कुनै पुरुषको प्रेम छैन’ – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. सम्बन्धविच्छेदबारे मनिषा कोइरालाले भनेकी थिइन्, ‘मेरो भाग्यमा कुनै पुरुषको प्रेम छैन’ – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
सम्बन्धविच्छेदबारे मनिषा कोइरालाले भनेकी थिइन्, ‘मेरो भाग्यमा कुनै पुरुषको प्रेम छैन’
मनिषा कोइरालाले सन् २०१० जून १९ मा नेपालका व्यापारी सम्राट दाहालसँग विवाह गरेकी थिइन् । उनीहरुको विवाह दुई वर्ष पनि टिक्न सकेन । विवाहको केही समयपछि नै मनिषा र उनका श्रीमान्को खटपट हुन थालेको थियो । विवाहको ६ महिनापछि नै मनिषाले सोसल नेटवर्किङ साइट फेसबुकमा उनको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन उनका श्रीमान् भएको र आफू उनीसँग बस्न नचाहेको लेखेकी थिइन् । यतिमात्रै होइन, दुई वर्षको विवाहमा उनीहरुबीचको मतभेद यदि बढ्यो कि उनीहरुले तत्काल आफ्नो विवाह समाप्त गर्ने बारे निर्णय गरे । यद्यपि, आफ्नो टुटेको विवाहमा मनिषाले एक अन्तरवार्तामा सम्बन्धविच्छेदका लागि उनी आफू नै जिम्मेवार भएको बताएकी छिन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको March 11, 2021 March 11, 2021 493 Viewed